မန္တလေးဂဇက်အဖွဲ့ဝင်များဆုံစည်းပွဲ နှင့် မန်းဂဇက်ချစ်သူများစာပေဆုပေးပွဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Members » မန္တလေးဂဇက်အဖွဲ့ဝင်များဆုံစည်းပွဲ နှင့် မန်းဂဇက်ချစ်သူများစာပေဆုပေးပွဲ
မန္တလေးဂဇက်အဖွဲ့ဝင်များဆုံစည်းပွဲ နှင့် မန်းဂဇက်ချစ်သူများစာပေဆုပေးပွဲ
Posted by ဦးဦးပါလေရာ on Jan 4, 2013 in Members, Myanmar Gazette | 202 comments
သိုင်းသိုင်းဝိုင်းဝိုင်းလေးရေးချင်ပေမယ့် ရှုပ်ထွေးသွားမှာစိုးလို့ လိုရင်းလောက်ပဲ အတိုချုပ်ပြီး ကြေငြာပါရစေ…။
ပြောဖို့ ဖြေဖို့ ဖြည့်ဖို့ လိုအပ်တာတွေကိုတော့ ကွန်မင့်လေးတွေနဲ့ပဲ ပြောပါရစေ….။
ဥက္ကဌ မပဒုမ္မာကိုယ်စား အသိပေးကြေငြာခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း….။
၂၀၁၃ နှစ်သစ်ရဲ့အစမှာပဲ မန်းဂဇက်ရွာကြီးရဲ့မှတ်တိုင်သစ်တခု စိုက်ထူပါတော့မည်…..။
မန္တလေးဂဇက်အဖွဲ့ဝင်များဆုံစည်းပွဲ နှင့် မန်းဂဇက်ချစ်သူများစာပေဆုပေးပွဲ မကြာမီ ကျင်းပပါတော့မည်…။
ရွာထဲမှာ အနေကြာသည်နှင့်အမျှ ရွာသူားတွေ စာချင်း ခင်မင်ရင်းနှီးမှု့ရင့်သန်လာသည့်နောက်
လူချင်းလဲ ပျော်ပျော်ပါးပါး တွေ့ဆုံကြ မိတ်ဖွဲ့ကြ ဆက်ဆံရေးသစ်တွေထူထောင်ကြရအောင်နော်……….
တက်ရောက်နိုင်သမျှ မန်းဂဇက်ရွာကြီးရဲ့ အဖွဲ့ဝင်(Member) အားလုံး…
ကန်တော်ကြီး ကရ၀ိတ်ဥယျာဉ်ထဲက မျှော်စင်ကျွန်းသို့အ၀င်လမ်းထိပ်မှာရှိတဲ့
P3 ထိုင်းစတိုင် စားသောက်ဆိုင်မှာ
၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇန္န၀ါရီလ ၂၀ရက် တနင်္ဂနွေနေ့
နံနက် ၉း၀၀ နာရီမှ ၁၂း၀၀ နာရီအတွင်း
တက်ရောက်လာတဲ့ မန်ဘာတွေကို နွေးထွေးပျူငှာ လှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆိုဧည့်ခံမယ်
မနက် ၉း၀၀ တိတိမှာ အခန်းအနား စ မယ်…..
၂၀၁၂ ဇူလိုင်လ မှ ဒီဇင်ဘာလအထိ မန်းဂဇက်ချစ်သူများ စာပေဆုရသူများကို
တက်ရောက်လာတဲ့ မန်ဘာများက အပြန်အလှန်မိတ်ဆက်စကား (တစ်မိနစ်လောက်စီ) ပြောကြမယ်……
ပြီးတော့ အမှု့ဆောင်အဖွဲ့က စားကောင်းသောက်ဖွယ်တွေနဲ့ ဧည့်ခံကျွေးမွေးမယ်…….
မန်းဂဇက်ရွာသူကြီး ဦးခိုင်က ကြိုတင်ပေးပို့ထားတဲ့ အိုင်တီဆိုင်ရာ ခေတ်မီ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများနဲ့ ငွေသားကံစမ်းမဲတွေကို သူကြီးရဲ့အမှတ်တရလက်ဆောင်အဖြစ် မဲဖေါက် ပေးအပ်မယ်……
၂၀၀၀ ပါဂျဲရိုး ဖါးပြုတ် တစ်စီးရယ်
၁၉၉၇ – လင်ခရူဇာပရာဒိုတစ်စီးရယ်
၂၀၀၃ – ကယ်ဒီးနားစက်ရုပ်တစ်စီးရယ်
၂၀၀၁ – တိုယိုတာ အာအေဗွီဖိုး တစ်စီးရယ်
ဒီတွေ့ဆုံပွဲကို တက်ရောက်မယ့် မန်ဘာတွေက ဘာလုပ်ဖို့လိုမလဲ…
ဒီပိုစ့်မှာ တက်ရောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ကွန်မင့်လေးနဲ့ စာရင်းပေးပါခင်ဗျား….
ဒီလိုကြိုတင်စာရင်းယူရတာက အစားအသောက်တွေကို တက်ရောက်မယ့်လူဦးရေအတိုင်း ကြိုတင်မှာကြားရမှာမို့ပါ…။
စာရင်းပေးဖို့ နောက်ဆုံးရက်က ၁၅.၁.၂၀၁၃ ည ဆယ့်တစ်နာရီ အထိဖြစ်ပါတယ်။
ကွန်မင့်နဲ့ စာရင်းပေးဖို့ အဆင်မပြေရင်လဲ အမှု့ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ (ရွှေတိုက်စိုး 0973114322) ထံ ဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်ပြီး စာရင်းပေးနိုင်ပါတယ်…။
စာပေဆုရသူတွေကို ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်မယ့် အစီအစဉ်က-
၂၀၁၂ ဖူလိုင်လ မှ ဒီဇင်ဘာလအထိ ခြောက်လအတွင်း လစဉ် အကြိုက်ဆုံးစာပေဆုရသူတွေ ကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်…။
ကိုယ်တိုင်တက်ရောက်မယူနိုင်ရင်လဲ အခြားတစ်ယောက်ကို ကိုယ်စားတက်ရောက်ယူစေနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်စားယူမယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ်စားယူမယ့်သူကို ဥက္ကဌမပဒုမ္မာထံသို့ဖြစ်စေ အမှု့ဆောင် (ရွှေတိုက်စိုး 0973114322) ထံသို့ဖြစ်စေ ၁၈.၁.၂၀၁၃ နောက်ဆုံးထားပြီး ကြိုတင်အကြောင်းကြားပေးပါခင်ဗျား…။
ကိုယ်တိုင်လဲမယူ ကိုယ်စားလှယ်လဲ မလွှတ်ဘူးဆိုရင်လဲ အဲဒီအကြောင်းလေးကို ဥက္ကဌမပဒုမ္မာထံသို့ဖြစ်စေ အမှု့ဆောင် (ရွှေတိုက်စိုး 0973114322) ထံသို့ဖြစ်စေ ၁၈.၁.၂၀၁၃ နောက်ဆုံးထားပြီး ကြိုတင်အကြောင်းကြားပေးပါခင်ဗျား…။ တချို့မန်ဘာတွေကို လူချင်းမသိတော့ ပုံမှားရိုက်သွားနိုင်လို့ပါခင်ဗျား…။
ခင်ခင်မင်မင် ပျော်ပျော်ပါးပါး ဆုံကြရအောင်…..
ပုံမတင်တတ်လို့ သည်းခံကြပါ အရပ်ကတို့….
parlayar 46 has written 74 post in this Website..
CJ # 3302011 2011/03/30 1:01:16 am
View all posts by ဦးဦးပါလေရာ →
20 ရက်နေ့က bar Camp 2013 ရဲ့ ဒုတိယနေ့
ယူထားတဲ့တာ တာဝန်က PR (public relationship) မှာမှ Topic Board နေရာဆိုတော့ကား
Speaker register နေရာဆိုတော့ လစ်လာလို့လဲရဘူး
အရင်နှစ်က PR မှာ Volunteer များသလောက် ဒီနှစ်မှာ Admin ကိုများသွားတာကြောင့် မလာနိုင်တော့ဘူးထင်ပါတယ်ချင့်
ဒီတခါတော့2ခုထဲက ဘယ်တခုကို ရွေးရမလဲ မသိတော့ဘူး ဂျ …
ဖြစ်တောင့်ဖြစ်ခဲ ရွာ တွေ့ဆုံပွဲ ကိုသွားလိုက်ပါလေ… OK?
အူးစည်လည်း ၂၀ ရက်နေ့ ဘောဘောပေါ်မှာ
အ၀တ်လျှော်ဖို့ရယ်… အမှိုက်ပစ် ဂါးဗေ့စ် ပစ်ဖို့
အရင်က လူများများ အမှိုက်ရှင်းသလောက်.. ခုတော့ ဆရာဒွေများတွားတော့
ဒီတခါတော့ ၂ခုထဲက ဘာကိုရွေးရမလဲတိတော့ဖူး ဂျာ..
အူးအူး …. ဘောဘော ပေါ်မှာ အမှိုက်ရှင်းတာပဲ အူးအုးရယ်
ဒိုင်ပင် ပစ်ဘီးလာခဲ့ရောပေါ့ ( :P)
အနော်ကတော့ နောက်နေ့မှ ပြောဆိုဘီး ရွေးမရလို့ အူးအုး စည်သူရေ …
ကွန်မန့် တွေဖတ်ပြီး တကယ့် ကို ၀မ်းသာအူမြူး ဖြစ်ရတယ်။ ကိုယ့် ကိုယ် ကို လည်း မလာ နိုင်လို့ အသည်းတွေ ယား နေမိ တယ်။ အိမ်က လူကြီး က တရုတ် နှစ်ကူး ပြီး မှ ခွင့် ယူ လို့ ရ မှာ ။ သားတော် မောင်နဲ့ ၂ ယောက်ထဲလည်း လေယာဉ်ပျံ စီးဖို့ အဆင် မပြေ။ ဒီနှစ်မှ ပဲ နှစ်ကူး ကလည်း နောက်ကျ ၊ ခါတိုင်း နှစ်တွေ ဇန်န၀ါရီ ၂၀ လောက်ဆို နှစ်ကူးပြီးပြီ။
ကိုယ်တိုင် မလာ တဲ့ အတွက် ဒီ ပွဲ ကို ကမကထ ပြုလုပ် စီစဉ်ပေး တဲ့ ရွာလူကြီးသူမ များနဲ့ ရွာသူား အားလုံးကို အားနာစွာနဲ့ တောင်း ပန် ပါတယ်။
ဦး ကျောက်ခဲ says:
သာဂျီးမင်း ဦးကိုင်ဆီက ရန်ကုန်ဆုပေးပွဲပြန်ဖို့ လေယာဉ်လက်မှတ်ခတစ်ဝက် မရသေးဘူးလား…..
အဲဒါကို နောက်တစ်ဝက်စိုက်ပြီး ပြန်ခဲ့လေဗျာ…..
ခင်ဗျား မတောင်းရင် သာဂျီး ပျော်နေလိမ့်မယ်….
ကော်မန့်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်.. ဖုံးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်.. အီးမေးလ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်.. တိတိကျကျလေး.. အကြောင်းကြားကြစေချင်ပါတယ်..။
…. ပွဲလုပ်ရင်.. အဲဒီအတွက်စားပွဲနေရာဖယ်ထားရပါတယ်..
လာမယ်ပြောပြီး.. ပေါ်မလာရင်.. လျှော်ကြစေချင်ကြောင်း..
နောက်ပြီး.. တကယ်ပြောတာ..မဟုတ်ဖူးဆိုတာ.. မဟုတ်တဲ့အကြောင်း..
ပွဲအတွက်.. နိုင်ငံတကာကနေ လာသူတွေ့သူများလည်းရှိနေတာမို့.. ဒီပွဲဟာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတန်းအဆင့်လို့.. သတ်မှတ်ရမှာဖြစ်ပါကြောင်း..ရယ်..။
နိုင်ငံတကာနဲ့ရင်ဘောင်တန်းနိုင်ဖို့ တက်ရောက်နိုင် မတက်ရောက်နိုင်ကို တရားဝင် အသိပေးအကြောင်းကြားတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုထွန်းကားအောင် ဒီပွဲကနေ စ ပြီး ပျိုးထောင်ယူမယ်ဆိုရင် ကောင်းမယ်။ :hee:
သူကြီးတို့ကတော့ လုပ်ပီ …. ပေါ်မလာရင် လျှော်ကြစေချင်ကြောင်း ဆိုတော့ ပေါ်လာပီး ဆုမဲမပေါက်တာတို့ဆိုရင် သူကြီးက တာဝန်ယူပြီးပေးမှာလား …. လောကကြီးမှာ လူဆိုတာ ဒီနေ့နဲ့မနက်ဖြန်တူဘူးလေ …. သများက အဲနေ့ကလေးမွေးသွားရင် ဘယ်လိုလုပ်မတုန်း ……
Green Rose လည်းတက်ရောက်ပါမယ် ဆိုတဲ့အကြောင်းသတင်းပို့ပါတယ်ရှင့် ၊
စကားမစပ်.. သူကြီးရေ..လာမယ်ပြောပြီးမလာဖြစ်ရင်. လျှော်ရမှာလား. .. လျော်ရမှာလား.
၁၆.၁.၂၀၁၃ နေ့ကျရင် တက်ရောက်မယ့်သူစာရင်းကို ရွာထဲကြေငြာပေးရင်း ကွန်ဖမ်းလုပ်ပေး ရင်ကောင်းလေ မလား တွေးမိတာလေးပါ။
ခရီးဝေး ရောက်နေမှာမို့ ခွင့်တိုင်ပါသည် ခင်ဗျာ
၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၄ ရက်
၁။ နတ်ပြည် သမ္မတ ဦးမာဃသည်
၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂၀ ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်မည့် မန္တလေးဂဇက်အဖွဲ့ဝင်များဆုံစည်းပွဲ နှင့်
မန်းဂဇက်ချစ်သူများစာပေဆုပေးပွဲသို့ တက်ရောက်မည် ဖြစ်ပါသည်။
၂။ နတ်ပြည်သမ္မတသည် ထိုမှတစ်ဆင့် ရွှေတိဂုံစေတီတော်သို့ သွားရောက်ဖူးမျှော်ကာ ညနေပိုင်းတွင် ဘားကမ့်ရန်ကုန်သို့
၃။ အထက်ပါကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သမ္မတအား ကြိုဆိုဧည့်ခံရေး အဖွဲ့ ကို အောက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းလိုက်သည်။
မဟာရာဇာ အံစာတုံး (ခ) ခြောက်မျက်နှာမာတလိ (နတ်ပြည် ရထားထိန်း)
မစ္စတာ ဆာမိ (ဂျလေဘီ ပို့ကုန်သွင်းကုန် ကုမ္ပဏီလီမိတက်)
ဤကြေညာချက်ကို ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၄ ရက်နေ့တွင် ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင် လက်မှတ်ရေးထိုး ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
(အဂ္ဂမဟာ သရေစည်သူ အဂ္ဂမဟာ သီရိသုဓမ္မ နေမျိုးဗလကျော်သူ
ဝဏ္ဏကျော်ထင် သီရိပျံချီ အလင်္ကာကျော်စွာ အောင်ဆန်းသူရိယ)
အရီး လေး says:
ကျွန်မကတော့ ဂေဇက် စာဖတ်သူ အနေနဲ့အဟောင်းပါ
မန်ဘာ အနေနဲ့တော့ အသစ်ပေါ့
နာမည်ကတော့ အရီးခင်လတ် ကို လေးစား အားကျ လို့ပေးထားတာပါ
တွေ့ဆုံပွဲ ကော်မန်းတွေ ဖတ်မရလို့ ခုမှဘဲဝင်ဖြစ်ပါတယ်
မှတ်ချက်လေးအတွက် ကျေးဇူးလဲ တင်ပါတယ်နော်။
ဟဲ့ … ကောင်လေးတွေနော်….
ကျုပ်ပိုစ့်မှာ ကျုပ်ကွန်မင့်ကို လာစိမ်းထားရသလား….
သူများမြင်ရင် ဟာသ ဖြစ်တော့မှာပဲ..
ဒီနေ့ စာရင်းပေးရန် နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်ပါကြောင်း….
ကိုဖက်တီး ကိုလဲ မျှော်မိပါကြောင်း…. (ရွာသူားတချို့ ပထမဆုံးဆုံဖြစ်အောင်ချိန်းတာ)
moonpoem ကိုလဲ မျှော်မိပါကြောင်း…. (ဘယ်သူမှမလာလဲ တွေ့ဆုံပွဲကို တစ်ယောက်ထဲလာမယ်လို့ သဘောထားရှိခဲ့တာ)
အခြားအခြားသော စာရင်းမပေးရသေးတဲ့ မန်ဘာများကိုလဲ မျှော်မိပါကြောင်း….
ပွဲတက်မယ် သေချာတဲ့ ရွာသူားစာရင်းလေး
ပို့စ်ထဲမှာ update ထည့်ပေးပါလားခင်ဗျာ..
လာမယ် ဦးဦးပါလေရာရေ ရောက်အောင်လာခဲ့မယ်။ ဒီတစ်ခါ လွဲလို့ မဖြစ်ဘူးနော်
ပုံရိပ်လေးတွေ ထွက်လာရင် တင်ပေးကြပါနော်
ကိုမင်းနန္ဓာ နှင့်တကွ ရွာသူားများခင်ဗျား…
ဒီပိုစ့်က စာရင်းကောက်တဲ့ပိုစ့်ဆိုတော့ မနက်ဖန်ဆို expire ဖြစ်သွားပါပြီ။
(မနက်ဖန်မှာ စတစ်ကီမှ ဖြုတ်လိုက်သင့်ပါကြောင်း)
အဲဒါအစား စာရင်းပေးထားတဲ့ တွေ့ဆုံပွဲတက်ရောက်မယ့်ရွာသူားစာရင်းကို အမှု့ဆောင်ရွှေတိုက်စိုးက ပိုစ့်တင် ကြေငြာ ပြီး နောက်တိုးတွေကိုလဲ update လုပ်သွားဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း……
အဲဒီပိုစ့်မှာ ကျုပ်ရေးမယ့်ကွန်မင့်ကို အခုထဲက အရင် အမြည်းပေးပါဦးမယ်…။
တစ်ချို့ ကိစ္စလေးတွေမှာ အမှတ်မထင် အမှားအယွင်းရှိတတ်တာမို့
ကြိုလို့ သတိပေး အသိပေး ပါရစေဗျာ…။
ဒီလို တွေ့ဆုံကြရာမှာ ခင်မင်ရင်းနှီးပြီးသူအချင်းချင်း နားလည်မှု့ရှိပြီးသူအချင်းချင်းအနေနဲ့
တစ်ဦးချင်းဖြစ်စေ အုပ်စုလိုက်ဖြစ်စေ ဓါတ်ပုံဗွီဒီယိုများ ရိုက်ကူးနိုင်ကြပေမယ့်
ကြိုတင်ခွင့်ပြုမထားတဲ့ ၊ ခွင့်ပြုမယ်မှန်းမသေချာတဲ့ အခြားသူများကိုတော့
ဓါတ်ပုံ ဗွီဒီယိုများ မရိုက်ကူးသင့်ပါကြောင်း…..။
ရိုက်လဲ မရိုက်သင့်သလို မတော်တဆ တနည်းနည်းနဲ့ ကြိုတင်ခွင့်ပြုမထားသူများရဲ့ဓါတ်ပုံတွေ ရခဲ့ရင်လဲ-
on line ( ရွာထဲမှာ၊ FB မှာ၊ အခြားဆိုက်တွေမှာတင်တာ၊ အခြားသူများနဲ့ ရှဲတာ) သော်၎င်း….
၀ff line (ကင်မရာချင်း ဖုံးချင်း ပို့တာ၊ ရှဲတာ၊ ဓါတ်ပုံထုတ်ယူပြသတာ) သော်၎င်း….
ဖြန့်ဝေခြင်း မပြုကြသင့်ကြောင်း အကြံပြုပါတယ်။
ကျုပ်တို့ဟာ လူအချင်းချင်းရဲ့ ကိုယ်ရေးလွတ်လပ်ခွင့်ကို အပြန်အလှန် လေးစားတဲ့ ရွာသူားများဖြစ်ကြောင်း ပြသကြပါစို့ ……
အခန်းအနားကို မှတ်တမ်းတင်ဖို့တော့ ကိုဘလက်ချောနဲ့ Mလုလင် တို့ တာဝန်ယူပြီးဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ထဲကတယောက်ယောက်က ပိုစ့်ရေးမှတ်တမ်းတင်မှာ ဖြစ်ပါကြောင်း….။
ပရိုက်ဗေစီ နဲ့ ထရန်စပေရန်စီ ပေါ့ :hee:
ဒီလိုလုပ်မယ်ဗျာ P3့ က ပွဲလုပ်မယ့်နေရာမှာ (smoking/ Non Smoking area ခွဲသလို) ခွဲထားလိုက်ရင် မကောင်းဘူးလား..
Transparent/ non-transparent area ဆိုပြီးတော့လေ
ဓါ့ပုံ ရိုက်မခံချင်တဲ့သူတွေ NTA ဝိုင်းမှာ ထိုင်လိုက်ကြ .. သူရို့ကို ရှောင်ရိုက်စရာ မလိုတော့ဘူး
မှတ်တမ်းထားတဲ့အနေနဲ့.. ဂရုဖိုတိုရိုက်စေချင်ပြီး.. အဲဒီပုံကို.. ယူအက်စ်မှာထုတ်တဲ့.. မန္တလေးဂဇက်ပုံနှိပ်သတင်းစာထဲ ထည့်မှာပါ..
ပါတဲ့ပုံက.. သတင်းစာထဲ.. ၄လက်မလောက်အရွယ်မို့.. ကိုယ့်ပုံကိုယ်တောင်…. မနည်းကြည့်ရမယ်ထင်ပါတယ်..။
Group Photo က ရိုက်ကို ရိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်…
သူကြီးဆီလဲ ကောင်းတဲ့ပုံတွေကို သီးသန့်ပို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီထဲ မျက်မှာမပေါ်စေချင်ရင် အရင်ထုံးစံအတိုင်း တခြားလူနဲ့မျက်နှာကွယ်နေလို့လဲရပါတယ်။
group ပုံရိုက်တာနဲ့ ခွင့်ပြုမထားတဲ့(ဓါတ်ပုံအရိုက်မခံချင်တဲ့) သူတွေကို ရိုက်တာ မတူပါကြောင်းခင်ဗျား…။
ဂန္ဓာရီ ဆြာအုပ် says:
ဒီပိုစ့်ကို မန်ဘာတွေသာဖတ်လို့ရအောင်လုပ်ထားရင် ဂန္ဓာရီဆြာအုပ်ရေးတဲ့ပိုစ့်ကိုလည်း မန်ဘာတွေပဲဖတ်လို့ရအောင်လုပ်သင့်တယ်။ ဂန္ဓာရီဆြာအုပ်ရေးတဲ့အဲဒီပိုစ့်မှာ အနည်းငယ်ဖြည့်စွက်ချင်တယ်။ တင့်ကားကုန်းဘက်က ၀င်ရင် ကရ၀ိတ်အ၀င်ဂိတ်ကိုကျော်ရင် L9လမ်းဆုံတခုကိုတွေ့မယ် ။အဲဒီလမ်းဆုံရဲ့ ဘယ်လက်အခြမ်းမှာ p3 ဆိုင်ရှိတယ်။ မြေပုံမှာအဲဒီလမ်းဆုံမပါဘူးဖြစ်နေတယ်။ L9 နဲ့ R9 ဟာလမ်း ၃ခွဆုံဖြစ်တယ်။ အဲဒီမှာ p3 ရှိတယ်။၀င်ကြေးတယောက် ၃၀၀ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်မ စာရင်းမပေးရသေးဘူးလားမသိဘူး … မမှတ်မိတော့လို့ အချိန်မှီ စာရင်းအမြန်လာပေးလိုက်ပါတယ် … လာမယ်နော် ….
ဟင် ..ည ၁၁ နာရီကျော်သွားပြီ၊
ကျမ ဟိုဖက်မှာ ရေလောင်းနေတာနဲ့ စာရင်းပေးဖို့ နောက်ကျသွားလို့၊
ဂရုဖိုတိုထဲတော့ ပါမယ်နော်။တစ်ယောက်ထဲပုံတော့ မတင်နဲ့။
တစ်ချို့ မန်ဘာတွေ ဓာတ်ပုံနဲ့ ပါမှာစိုးပြီး မတက်ကြတာတွေရှိမှာစိုးလို့ တစ်ခုရှင်းပြချင်ပါတယ်။
အပေါ်မှာ ဦးပါမန့်သလိုပဲ ဂရုဖိုတိုထဲပါချင်တဲ့သူပါ၊မပါချင်တဲ့သူ ၀င်မရိုက်လို့ရပါတယ်။
တစ်ဦးချင်းပုံတွေကိုလည်း ခွင့်မပြုရင် မတင်ဖို့ တံခါးမှူးကြီး ကိုဘလက်နဲ့ လုလင်ကို မှာထားပါမယ်။
ဟိုအရင်က ဒီလို အလေ့အထတွေ အသားမကျသေးတော့ ရွာသူားတွေကို ကိုယ်မြင်သလို မြင်ဖူးကြစေချင်တဲ့ စေတနာနဲ့ တင်မိကြတာပါ။
စိတ်မကောင်းလိုက်တာ.. ရက်လွန်မှဖတ်မိတော့ စာရင်းပိတ်သွားပြီပေါ့နော်…. အားလုံးရဲ့အပြုံးလေးတွေကိုတော့ မြင်ချင်မိသား…..
မမကလဲ လူရင်းကြီးတွေကို အဲလိုမလုပ်ရဘူးလေ …
မိတိုက်ကို ဖုန်းဆက်ပေးရမလားမမ .. လာမယ်ဆို ကြိုဆိုကြမှာပါနော် ….
စာရင်းမပေးမိပေမဲ့ အဲဒီနေ့မှ စိတ်ကူးပေါက်ပြီး လာရင်ကောရလား။
လာဖြစ်မယ်မထင်လို့ စာရင်းမပေးမိပေမဲ့ အဲဒီနေ့ကြမှ အချိန်ရပြီး လာခဲ့ရင်ကော လက်ခံမှာလား။
ဒီ မှတ်ချက်ကို မတွေ့လို့ ဟိုဘက်မှာ ကြပ်ထားတယ်။
မသေချာလဲ ၅၀/၅၀ မျိုးဆိုရင် စာရင်းပေးထားသင့်တယ် ထင်ပါတယ် မင်းနန်နဝါ ရေ။
မန်ဘာပေါင်း ရာထောင်ချီ နေတာ ဒီလို အားချိန် လာတဲ့သူတွေ အများကြီး ဆိုရင်ပွဲ မှာ အနှောက်အယှက် ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခု က စာရင်းပေးထားသူတွေ က နောက်ကျ စာရင်းမပေးသူတွေ က အရင်ဦး ပြီး နေရာ မရှိတော့ ရင် စာရင်းပေးသူ တွေ ဟာ ဦးစားပေးဖြစ်ဖို့ ပါဘဲ။
အမှန်က Seating Plan တောင် ကြိုပြီး လုပ်ထားဖို့သင့်ပါတယ်။
ကိုယ်တိုင်မပါနိုင်ဘဲ လေနဲ့ဝင်ရွှီးနေရတာ ကိုတော့ အားနာပါတယ်။
ဒီလို ပြောလို့ စိတ်မရှိပါနဲ့။
ဒါမျိုးတွေ က အများနဲ့ လုပ်တဲ့ပွဲတွေမှာ ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ အကြောင်းမို့ပါ။
manawphyulay ကော ၊
minnannawar ပါ ၊
ကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ ။ လာခဲ့ပါ ၊ ရပါတယ် ။
တကယ့် လူရင်း ရွာသူား ကြီးတွေပဲဟာ ။
ကျနော်တို့က Gathering မိတ်ဆုံစားပွဲ လုပ်တာပါ ။
သိပ်တင်းကျပ်တဲ့ Formal Meeting မှ မဟုတ်တာဗျာ ။
လူများရင် ပိုတောင်ပျော်သေး ။
. အခု လက်ရှိ မန်းဂဇက်မှာ အပုဒ်ရေ အများဆုံး တင်ထား သူ နဲ့ ကွန်မန့် အများဆုံးပေးထားသူ နှစ်ယောက်ကိုလည်း အမှတ်တရ လက်ဆောင်ပေးဖို့ ရှိပါတယ် ။
အဲ့ဒီ့ လက်ဆောင်နှစ်ခု လုံးကို မန္တလေး ကဘဲ ဦးဆောင် ရရှိသွားပါတယ် ။
ပုဒ်ရေ အများဆုံးက လေးပေါက် နဲ့ ကွန်မန့် အများဆုံးက ကိုပေပါ ။
လေးပေါက် က မလာ ရောက်နိုင်လို့ ကိုယ်စားလှယ် အနေနဲ့ လုလင်ကို လွှဲပေးထားပါတယ် ။ ကိုပေ လည်း မလာရောက်နိုင်ရင် ကိုယ်စားလှယ်လွှဲပေးပါဦးနော် ..
ပေးသူက ပေးတာတောင် ယူသူက မလာနိုင်ခြင်းကို။
ကျနော်လဆန်းက မှရန်ကုန်ကိုအလုပ်နှင့်ရောက်လာပြီး ပြန်သွားခဲ့လို့ပါ။
နောက် ရန်ကုန်မှအလုပ်ပိတ်ရက် တနင်္ဂနွေဖြစ်ပြိး
မန်းလေးပိတ်ရက် က ဥပုဒ်နေ့ဖြစ်နေတော့ ပိတ်ရက်မဆုံလို့လဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပိတ်ရက်ဆုံလျင် ညကားစီးလာ မနက်ရောက်ညကားပြန်စီးပြီး ပြန်လျင်ဖြစ်နိုင်ပါ၏။
လာလိုလျက်လွဲ လလေး လုံး
ကိုရွှေတိုက်စိုးထံ အလျင်အမြန် သတင်းပို့ ပြီးပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။
ကျတော် မောင်အောင်မိုးသူ တက်ရောက်ပါ့မယ်ခင်ဗျာ ဆုယူရမှာဆိုတော့း)
ဆုပေးပွဲ လာချင်လိုက်တာ။ ဒီပွဲအရေးကြီးတယ်လို့ သိနေတယ်ရှင်။ အွန်လိုင်းမီဒီယာဟာ ပရင့်မီဒီယာလိုပဲ တကယ်လေးနက်တယ်လို့ ပြသတဲ့ပွဲမျိုးဖြစ်နေပြီနော်။ ရွှေအမြုတေ ဆုပေးပွဲကျင်းပသလိုမျိုး အခုလည်း မန်းဂေဇက်က စလုပ်ပြီဆိုတော့ တကယ့်ပွဲပဲ။ ဂျာနယ်တွေထဲ ပါအောင် ဘယ်လိုစီစဉ်ထားလဲ မသိဘူး။ ပရဟိတ အဖွဲ့ပါဖွဲ့ထားနိုင်တော့ မန်းဂေဇက်ဟာ တကယ်အားကောင်းနေပါပြီ။
ရေကူးမယ်. အစီအစဉ် ပါဘူးလားခင်ဗျ
ရေမြင်ရင် ဆော.ချင်လို.ပါ ဟီးဟီး..
ခင်လို. စတာနော် စိတ်ဆိုးနဲ…..